Kalfadhiga baarlamaanka Puntland oo loo diyaar-garoobayo furitaankiisa & Deni oo kuwajahan. – Puntlandtimes
Kalfadhiga baarlamaanka Puntland oo loo diyaar-garoobayo furitaankiisa & Deni oo kuwajahan.
June 13, 2019 W LAASCAANO
GAROOWE(P-TIMES)- Kalfadhiga baarlamaanka Puntland ayaa la qorsheynayaa in uu furmo 15-ka bishan June, iyadoo ay kasoo qeybgali doonaan madaxda ugu sareysa dawladda Puntland, waxaana kalfadhiga sida sharciga ah furi doona Madaxweynaha maamulkaas Siciid Cabdullaahi Deni.
Mudanayaasha baarlamaanka Puntland ayaa hadda kusoo xaroonaya magaalada Garoowe, waxaana kalfadhigan ay uga hadlayaan arrimo kala duwan oo ay ku jiraan qodobada la xariira ammaanka, difaaca, dhaqaalaha iyo siyaasadda.
Madaxweynaha Puntland oo hadda kusugan dalka Itoobiya ayaa khudbad gaar ah ka jeedin doona kulankan, waxaana khudbadaas uu kaga hadli doonaa waxyaabihii kala duwanaa uu qabsoomay tan iyo markii la ansixiyey xukuumadiisa.
Gudoomiyaha baarlamaanka Cabdixakiim Dhooba-Daareed ayaa shalay dib ugu laabtay magaalada Garoowe, isagoo kasoo laabtay gobalka uu ka soo jeedo ee Sanaa goo ay maalmihii u dambeeyey ka jireen xiisado colaadeed oo u dhaxeeyey Puntland iyo Somaliland.
Warar hoose ayaa sheegaya in kalfadhigan ay xildhibaanadu ugahadli doonaan qodbo xasaasi ah oo ay ka id yihiin arrimaha mashaariicda oo dibu eegis lagu sameynayo iyo welwelka ay ka qabaan shacabka qaarkood arrimaha dekedaha la xariira.